Mukudanana Nemurume Akaroora? 13 Chokwadi Chaunofanira Kunzwa. - Ukama
Mukudanana Nemurume Akaroora? 13 Chokwadi Chaunofanira Kunzwa.
Kana iwe uchidanana nemurume akaroora, iwe pamwe urikusangana nezvakawanda zvinopesana nemanzwiro izvozvi.
ndeipi inotevera wwe kubhadhara maonero
Dzimwe dzenguva, iwe haugone kubatsira asi kunzwa unofara uchifara, nekuti iwe wawira murudo.
Asi zvino wobva wadzoka uchirovera pasi pasi kuchokwadi uye uchayeuka kuti akaroora, uye kuti mamiriro acho akaomesesa.
Uye zvinoitwa zvinotonyanya kushushikana nenyaya yekuti hauna kumbobvira wasangana kuti usangane kana kudanana nemunhu akatoroora.
Iwe uchangobva kuzviwana iwe mune ino mamiriro, uye ikozvino hauzive zvekuita.
Ehezve, hapana hukama pakati pevanhu vaviri hunombo fanika hwakafanana neumwe.
Hukama hwauinahwo nemurume uyu nehukama hwaanaye nemukadzi wake zvese zvakasarudzika, uye zvinonetsa kune chero munhu wekunze kuti anzwisise, saka zvakaoma kupa zano rakajairika mumamiriro ezvinhu akadai.
Asi pane zvokwadi dzakaomarara idzo dzaungangoda kunzwa, chero ari mamiriro auri.
Mushure mezvose, yako yazvino mamiriro haina kuenderera. Ndinofunga isu tese tinogona kubvumirana pane izvo.
Uye kana iwe uri kuverenga izvi, iwe uri pakutsvaga mhinduro.
Iwe unogona kunge wakapihwa rairo rese chairo neshamwari dzako uye nemhuri (kana wakambovaudza), asi zvinogona dzimwe nguva kuve nyore kwazvo kunzwa zvinhu izvi kubva kune wausingazive pane kubva kune mumwe munhu wauri padyo naye.
Chimwe chinhu chinofanira kuchinja, uye hakuzovi nyore kufamba.
Teerera, iyi inzvimbo isina-kutonga - iwe hauna kufunga kudanana nemurume akaroora, asi isu hatigone kudzora moyo yedu. Saka zvinotevera hazvina kuitirwa kuti unzwe zvakashata nezve zvakaitika, kunyangwe zvikarova zvakanyanya dzimwe nguva.
Uine izvo mupfungwa, heano zano redu rekuti ungatore sei chiito uye kufambira mberi neupenyu hwako.
1. Unofanira kufunga kana uchigona kuvimba naye zvechokwadi.
Kana murume ari muwanano yemurume mumwe achisangana, pane manyepo mazhinji ari kuitika, saka unotoziva kuti anokwanisa kunyengera.
Kunyepa ikoko kwakawedzera kwauri here? Waizviziva here kuti akange akaroora kubva pawakasangana naye, kana kuti akanyepera nezvazvo?
Izvo zvaari kunyepera mukadzi wake mureza mutsvuku, asi kana anga achiedza kudhonza mvere pamusoro pemeso ako, saka unofanirwa kubvuma kuti ari chokwadi kusavimbika .
Dai akazombosiya mukadzi wake nekuda kwako, hauna vimbiso yekuti haaizoita chinhu chimwe chete kwauri makore mashoma pazasi pemutsara.
2. Unogona kunge usiri wekutanga.
Kana iye achiratidzika kunge asina chero chinangwa chaicho chekusiya mukadzi wake iwe, ungangodaro usati uri wekutanga 'mumwe mukadzi.'
Kana kunyangwe iye chete mumwe mukadzi, kunyange izvo zvaizosanganisira hunyanzvi hwekuronga hunyanzvi kwaari. Mushure mezvose, zvakaoma zvakakwana kusvina hukama huviri muvhiki.
Kunyangwe akakosha sei kukuita kuti unzwe kana kuti mukudanana sei nemurume akaroora uyu iwe, haugone kunyatso kuziva kana iwe uchingova mumwe mumutsara murefu.
3. Haufanire kunge wakagara wakamirira.
Funga nezvehukama hwako nemurume uyu kusvika parizvino. Ini hazvingafadzi kubheja kuti zvinosanganisirwa zvakanyanya iwe wakamumirira.
Iwe gara mukati, kungoitira kuti atumire mameseji ekuti akwanisa kuverevedza achienda. Unomumirira kana anonoka kumazuva nekuti akatadza kuwana chikonzero chekuenda.
Uri kuumbiridza nguva yako kure wakamirira kuti afone, iwe paunogona kunge uriko uchigara.
4. Hausi iye wekutanga kukoshesa.
Hazvina mhosva kuti angaedza zvakadii kukugonesa neimwe nzira, kana iwe uri mumwe mukadzi, hausi nhamba yekutanga pane rake rekutanga runyorwa. Mukadzi wake aripo, uye, kana aine vana, ivo vari.
5. matauriro aanoita nezvemukadzi wake anogona kukuudza zvakawanda.
Anoremekedza here paanotaura nezvemukadzi wake? Kana zvisiri, unogona sei kutenda kuti anokuremekedza uye zvechokwadi?
6. Anenge asiri kuzosiya mukadzi wake.
Vashoma kwazvo varume vakaroora vanoguma vasiya vakadzi vavo kune vadikani vavo, uye mikana ndeyekuti hausi iwe wega unoratidza mutemo.
Kurambana chinhu chikuru kwazvo, uye kune zvinhu zvakawanda zvinomuchengetedza ari muwanano, kunyangwe angave asingafare anoti arimo.
Usatende mazwi ake, kana zviito zvake zviri zvese zvinoverengeka pano. Paunenge uchidanana nemurume akaroora, izvi zvinogona kuve zvakaoma kuyeuka - asi iwe unofanirwa.
7. Iwe unogona kunge uri kunakidzwa nekunakidzwa kwaro, zvishoma.
Izvi zvinogona kunge zvakaoma kuti ubvume kwauri pachako, asi uhwu hukama hune njodzi, uye izvo zvinogona kuve zvakanaka seksikäs.
Unofanirwa kubvuma kuti panogona kunge paine chikamu chako chiri kutora kick kubva pazano rekuita bonde. Uye ndizvo chaizvo zviri kuitika kwaari.
Izvi zvinogona kunge zvisiri zvechokwadi kwauri zvachose, asi kana zvirizvo, yeuka kuti kana iye akasiya mukadzi wake, iyo njodzi yese yaizodonha.
Hukama hwako hungango shanduka kupfuura kuzivikanwa kwese, uye iwe unofanirwa kusangana nematambudziko ekuti awane kurambana kwake.
Iwe unongoerekana watanga kurarama zvisina kujairika zuva nezuva kusvika zuva pamwe chete, pane kungobvutirwa nguva dzechishuwo, uye kamwe kamwe angave asiri kuita seanonakidza.
8. Kana paine vana vanobatanidzwa, urikutamba nemoto.
Kana murume akaroora wauri kudanana naye ane vana nemukadzi wake, wakazviisa mumamiriro ezvinhu akaomarara zvisingaite.
Kana iye akasiya mukadzi wake nekuda kwako, izvo zvaizokanganisa zvakanyanya hukama hwake nevana vake.
Kana ivo vachiziva kuti baba vavo vakasiya amai vavo nekuda kwako, ivo vangangodaro vasina ushamwari newe, izvo zvinogona kuunza kukakavara kwakakomba pakati pako newe.
seth rollins uye becky lynch
9. Matambudziko emhuri yake haasi ose kwaari.
Chokwadi, anogona kunge akaroora mumwe munhu waanongofa naye hazvienderani . Asi kana zvisiri, matambudziko emuchato wake haasi ese ari pasi pake.
Anogona kunge aine nyaya, kana imwe nzira yehukama hwakakomba iyo inogona kukonzeresa matambudziko pakati penyu imi muchiwedzera pasi mutsetse zvakare.
Usazvibate wega kuti zvingasiyana newe.
10. Uri wenguva pfupi.
Zvakaoma kubvuma izvi, asi kunyangwe aine shungu sei newe izvozvi uye kuti zvingaratidzika sekuti anokuda sei, ingori nyaya yenguva usati watanga kuita dambudziko, uye anoneta newe.
nzira yekuwana rombo rakanaka muhupenyu hwako
Kuba nguva yekuva pamwe isekese kutanga nayo, asi inokurumidza kuoma.
Chinhu chinodya nguva uye chinotyisa, uye kana mufaro wepakutanga danho rehukama hwako wapera, anokurumidza kuneta nazvo.
3 Nzira dzeKufambira Mberi Kubva kune Iyo Affair
Ndine chokwadi chekuti zvimwe zvacho zvainetsa kuverenga, asi pamwe waifanira kuzvinzwa.
Uye ikozvino, iwe unofanirwa kutarisa kune ramangwana uye uone zvauchazoita.
Kunyangwe iwe uchigona kunge uchidanana nemurume akaroora izvozvi, pane nzira dzekuzviburitsa iwe kubva mune ino mamiriro.
Ndinoziva, ndinoziva. Iyi inzira yakapusa, uye ndine chokwadi kuti wakambozvinzwa kane miriyoni kare, kunyanya kubva kushamwari dzako dzepedyo uye nevanhu vese vanokuda ... kana wakatovaudza.
Asi iwe unofanirwa kufungisisa zvakanyanyisa kana hukama uhu huri kukupa iwe chero chinhu chakanaka zvachose, kana inguva yekucheka tambo zvachose.
Pamusoro pazvose, zviitire moyo munyoro, uye ita shuwa kuti unobvuma apo hukama nemurume akaroora chinotanga kukukanganisa.
2. Kusvirana nevamwe varume.
Kana iwe usingakwanise kuzviunza iwe pachako kuti uparadzane naye, saka zvirinani vhura zvaunogona kuita.
Endai pamazuva nevamwe varume. Kutamba nemurume iyeye anopisa pabasa. Edza kufambidzana kwepamhepo. Iwe wakasununguka zvachose kuti uone vamwe vanhu.
Mushure mezvose, imi vaviri hamusi vega. Achiri kuvata nemukadzi wake, zvisinei nekuti angati kudii.
Kuona vamwe vakomana kunogona kukuyeuchidza kuti kune hove dzakawanda mugungwa, kuitira kuti kana zvikadaro, zvingangoitika, zvopera, unenge usiri kuchema muice cream yako, uine chokwadi chekuti hauzombowana mumwe munhu.
3. Sunga zvinhu.
Kana murume akaroora uyu akakuudza kuti ari kuzokusiira mukadzi wake, saka zvakanaka. Ndingazoshamisika kana zvikaitika chaizvo, asi hei, ini ndini ani kuti nditonge mamiriro ako ega.
Asi usaramba uchimuona uye kurara naye panguva iyi, apa achiramba achitsvaga zvikonzero zvekusazviita nhasi, vhiki ino, mwedzi uno, kana kunyangwe gore rino.
Muudze kuti haufunge kuti unofanira kuramba uchionana murudo kusvika apedza zvinhu nemukadzi wake.
Ichakurumidza kujeka kana iye aine chero chinangwa chekusiya, kana kuti inguva yekuti iwe uenderere mberi.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita nezve ako manzwiro uye / kana hukama hwauri kuita nemurume akaroora uyu?Haisi mamiriro ari nyore kuvemo uye zvinogona kutonyanya kuoma kana usina munhu wekutaura naye. Kunyangwe iwe ukadaro, ivo vanogona kunge vasina kwavakarerekera. Ndipo panogona kuuya chipangamazano wehukama uye uve nzeve yekuteerera iwe uye izwi rekupa rairo inofungwa zvakanaka.Taura pamhepo kune wehukama nyanzvi kubva kuRelationship Gamba uyo anogona kukubatsira iwe kuti uzive izvo iro ramangwana rakabata kune yako hukama Simply.
Chii Chinofungidzirwa Kubiridzira Muhukama?
Kudzoreredza Hukama: Zviratidzo zvekutarisa Kunze
Sei Vanhu Vachiroora? 15 Zvakanaka Nezvakaipa Zvikonzero Zvekuroora!
nzira dzekutaura ndinokuda ndisina kuzvitaura
aj mataera theme rwiyo wwe
maitiro ekuita nemakuhwa kumashure kwako
wwe mbishi 7/18/16
chii chakaitika kuna jim ross
zvekuita kana mumwe munhu achinyepa nezvako